Wararka Maanta: Jimco, Jan 24, 2014-Madaxda sare ee Puntland oo Maanta la caleemo-saarayo (SAWIRO)
Goobta ay xafladdu ka dhacayso -oo ammaankeeda si aad ah loo adkeeyey- waxaa ku sugan mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Puntland sida: Madaxweyne Gaas, ku-xigeenkiisa Mudane Camey iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Siciid Xasan Shire. Waxaa sidoo kale madasha ku sugan mas'uuliyiin horay xilal kala duwan uga soo qabtay Puntland oo ay kamid yihiin: madaxweyneyaashii hore C/raxmaan Faroole iyo Jen. Cadde.
Wufuud tira badan oo ka kala socda beesha caalamka, dowladda federaalka Soomaaliya, wadammada Soomaaliya deriska la ah iyo maamullada kale ee dalka ka jira -oo 24kii saac ee lasoo dhaafay Garoowe soo gaaray- ayaa iyaguna ka qayb gelaya munaasabadda caleema saarka madaxda cusub ee Puntland hoggaamin dootna shanta sano ee soo socota.
HALKAN K DAAWO SAWIRRO BADAN:
Mas'uuliyiinta shalay Garooowe soo gaaray ee xafladda lagu martiqaaday waxaa kamid ah: ergeyga gaarka ah ee xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay, madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Madoobe, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyo wufuud kale oo ka kala socda dalalka: Itoobiya, Kenya iyo Jabuuti.
Madax kale oo safiirro badan oo ka kala socda: Midowga Yurub, Midowga Afrika, IGAD, Maraykanka, Turkiga, Qadar iyo Kuwait ayaa iyaguna goobta ku sugan. Marti-sharafta oo ay tiradoodu kun qof ku dhow dahay waxaa sidoo kale qayb ka ah isimmo, culimaa'uddiin, xubno ka socda ururrada bulshada iyo qurbe-joog tira badan.
Nuxurka khudbadaha laga jeediyo madasha iyo sawirradaba dib ayaan idiinka soo gudbin doonnaa, waxaana xusid mudan iyo xaflad kale oo casho-sharaf ah isla caawa ay ka dhici doonto xarunta madaxtooyada ee Garoowe, xafladdaas oo ay kasoo qayb geli doonaan wufuudda Garoowe u yimid si ay uga qayb qaataan caleema saarka madaxda cusub ee Puntland.